Public Voice Television (PVTV) သည် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးလိုလားတောင့်တလျက်ရှိသော ဖ… – PVTV Myanmar
· 10 months ago ·46 Comments
Public Voice Television (PVTV) သည် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးလိုလားတောင့်တလျက်ရှိသော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု (Federal Democracy Union) ဖြစ်တည်ပေါ်ပေါက်လာရေးကို ဦးတည်တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် ကြားကာလအချိန်အတွင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw – CRPH)၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ (National Unity Consultative Council – NUCC) နှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (National Unity Government – NUG) တို့၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ CRPH, NUCC နှင့် NUG တို့၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်နေသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သတင်းအချက်အလက်များ၊ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှု(နွေဦးတော်လှန်ရေး)တွင် ဓမ္မဘက်ဖြစ်သည့် ပြည်သူလူထုက အောင်ပွဲဆင်နိုင်ရေးကို အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် အနုပညာလက်ရာများနှင့် ဖန်တီးတင်ဆက်မှုများကို စုစည်းတင်ဆက်သွားရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အနုပညာဖန်တီးထုတ်လုပ်သူများအနေနှင့် နွေဦးတော်လှန်ရေး အောင်ပွဲအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်မည့် အနုပညာလက်ရာနှင့် ဖန်တီးတင်ဆက်မှု(Video Content)များ ကို PVTV ၏ သတင်းထုတ်လွှင့်မှု Channel များတွင် ထည့်သွင်းတင်ဆက်ခွင့်ပြုနိုင်ပါက အောက်ပါ မေးလ်လိပ်စာ သို့ ပေးပို့ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံတောင်းခံအပ်ပါသည်။
PVTV Editorial Team
Like – 30K Share – 6042
အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကို ကူညီပေးရေးအတွက် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကို မြန်မာ-ကမ္ဘောဒီးယား အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ၂၁၇ ခုက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချ
ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကြည့်မြင့်တိုင်မြို့နယ်တွင် လူထု ပျောက်ကြား သပိတ်စစ်ကြောင်းကို ကားဖြင့်တိုက်ပြီး ပစ်ခတ် ဖြိုခွင်းခံရ
2021-04-15 at 5:42 PM
အောင်မြင်ပါစေ PV TV.
Khun Shwe says:
R2P ဝင်လာတဲ့နေ့ တိုင်းရင်းသားတပ်မတော် နဲ့ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ရရာ လက်နက်စွဲကိုင်းပြီး အာဏားရူးတွေကို ချေမှုန်းကြမယ်။ ပြည်သူတွေက စစ်ဖြစ်မှာ မကြောက်တော့ဘူး။ စစ်မဖြစ်မှာ ကို ကြောက်နေကြတာ။ အမြန်အကောင်အထည်ဖော်နိင်ပါစေ။
Ko Gyi Kyaw Nanda says:
2021-04-15 at 5:49 PM
Page အလွယ်တကူ ဖြုတ်ချမရအောင် Recommend လုပ်ပေးကြပါလားဗျာ
Min Kyaw Soe says:
2021-04-15 at 5:59 PM
အစိုးရ ကြေညာဖို့ ရက်ကောင်းရက်မြတ် ရွေးသင့်ပါတယ်
ဧပြီ ၁၆ – သောကြာ- သင်္ကြန်အတတ်နေ့ – ရက်ရာဇာ။
ဧပြီ ၁၇ – စနေ – နှစ်ဆန်းတရက် – ပြဿဒါး။
Ye Oo says:
2021-04-15 at 6:25 PM
MRTV MWD စောက်တလွဲတွေထက် အပြတ်အသတ်သာသော ဒီဇိုင်းကာလာနဲ့ PVT 👏👏👏
Ai Pym Ni Dym says:
2021-04-15 at 6:31 PM
We watching voices of people.
Khinmar Win says:
2021-04-15 at 6:34 PM
ႀကိဳဆိုပါ၏ ျပည္သူအတြက္ႏွစ္သစ္လက္ေဆာင္ေလးအတြက္ေက်းဇူး တင္ပါတယ္႐ွင့္။
Thet Khine says:
ပြည့်သူ့ အစိုးရ အား လိူက်လဲစွာ ကြိုဆို ပါသည်။
War War III says:
2021-04-15 at 7:14 PM
အစိုးရအဖွဲ့ ကြေငြာပေးပါဗျို့ ရသလောက်နဲ့ လုပ်ပေးပါ ကျန်တာ နောက်မှ ကြေငြာပါ
Ah Htet Sai says:
We need R2P IMMEDIATELY SAVE MYANMAR PEOPLE
Chara Evirstrina says:
2021-04-15 at 7:34 PM
ဖက်ဒရယ် တပ်မတော်ဖြစ်လာမယ့် တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေး တပ်မတော်ရဲ့ တိုက်ပွဲ တွေအကြောင်း ကမ္ဘာသိအောင် ချပြပေးပါ
Khaing Zaw says:
2021-04-15 at 7:41 PM
ႀကိဳးစာပါ. အာေပးမွာ. ကိုယ္တုိင္လည္းႏိုင္သေလာက္လုပ္.မယ္. Fighting
2021-04-15 at 7:47 PM
ကြိုဆိုပါ၏ ပြည်သူအတွက်နှစ်သစ်လက်ဆောင်လေးအတွက်ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ခင်ဗျ
Daw Thin says:
2021-04-15 at 7:59 PM
PV TV အဖွဲ့သားများဘေးရန်ကင်းပါစေဂုဏ်ယူမြောက်ပါသည်
2021-04-15 at 8:06 PM
We Stand with Public Voice Television!
နတ် နက္ခတ် says:
2021-04-15 at 8:44 PM
ဖြစ်ခြင်တာ ဖြစ်မလာတော့လည် ပြည်သူအများခရမ်းသီး မီးလောင်သလို ဖြစ်နေပါပြီ
2021-04-15 at 8:56 PM
ပြည်သူ့အစိုးရ အစစ်အမှန်ကို ထောက်ခံပါတယ်။ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်။
အမရာ ထားဝယ် says:
2021-04-15 at 9:10 PM
Welcome Public Voice TV.
Dee Soe says:
2021-04-15 at 9:24 PM
John Alka says:
2021-04-15 at 9:34 PM
Channel Variety နဲ့ပေါင်းပေးပါ။ Channel Variety က Admin ကျွန်တော်ပါ။
Mar Kyi says:
2021-04-15 at 10:03 PM
Shwe Myanmar says:
2021-04-15 at 10:19 PM
Wai Moe Naing is the main suspect in the killing of two Monywa police officers. Is it wrong to arrest the wanted criminal? What do you need to keep an eye on? Are you afraid that the CIA contacts or about OIC funding will be revealed by him?
2021-04-15 at 10:24 PM
ငါတို့ အားလုံး စည်းလုံးရမယ်နော်
အဖွဲ့ တခုမှာ ယုံကြည်မှုနဲ့ စည်းလုံးမှု
သစ္စာဖောက် တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ
Zeon Yaw says:
2021-04-15 at 10:35 PM
ကြေညာအမြည်းလေးက အဓိပ္ပါယ် အတော်ပြည့်ပါတယ်။
1. News သတင်း
2. Politics နိုင်ငံရေး
3. Spring Revolution နွေဦးတော်လှန်ရေး
4. Democracy သာတူညီမျှ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမျှတခြင်း စနစ်
5. Federal Union တိုင်းရင်းသားထု၏ပြည်ထောင်စုအတွင်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဦးဆောင်မှု အပေါင်းအစည်း
6. People Defense Force ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအင်အားစု။
အကုန်လုံးဟာ စစ်အာဏာချုပ်တဲ့ ပြည်သူ့ဆန္ဒတွေချည်းပဲ။
Zaw Thet Khaing says:
We soup your
Nanda Tunlin says:
2021-04-15 at 11:00 PM
Yee Yee San says:
2021-04-15 at 11:05 PM
ပြည်သူ့အစိုးရအားလှိုက်လဲစွာကြိုဆိုပါသည်။အောင်မြင်ပါစေ PV TV.
We standing with you.
Steeven Lay says:
2021-04-15 at 11:18 PM
ဒီထက်မက အောင် အောင် မြင် မြင် ပိုပြီး ထုတ် လွင့် နိုင် ပါစေ
2021-04-15 at 11:30 PM
Public Voice TV အားလှိုက်လဲစွာကြိုဆိုပါတယ် အမြဲကြည့်ရှုအားပေးနေပါမည်
Michael Aung Mandalay says:
2021-04-15 at 11:39 PM
အနုပညာ လက်ရာနဲ့ ဖန်တီးတင်ဆက်မှု့ content တွေ တောင်းခံနေတာပါ။ ပညာရှင်များ ကူညီပြီး ပေးပို့ပေးကြပါခင်ဗျာ။🙏🙏🙏
Mg Mg Villager says:
2021-04-16 at 12:09 AM
Great ! Must use to give viber and line numbers too
Nay Myo Han says:
2021-04-16 at 12:33 AM
PSI ​ေတြ​ေတာ့ သိမ္​းသြားၿပီ
ဘယ္​ က ဖမ္​းၾကည္​့ရမလဲ
Yound Ni says:
2021-04-16 at 12:47 AM
မနက်ဖြန် ​၁၆ ရက်​နေ့
CRPH ရဲ့ ကြားကာလ အမျိုးသား​ရေးညီညွတ်​ရေး အစိုးရအဖွဲ့ ကို ​ကြေညာမယ် လို့ သိရပါတယ်။
ဟိုလူ မပါလို့၊ ဒီလူ မပါလို့တို့
ဟိုလူထက် ဒီလူ့ကို ​ရွေးသင့်တယ်တို့
ဒီလူ​တွေဆို အားမ​​ပေး၊ မ​ထောက်ခံဘူးတို့ …
စသဖြင့် အဖျက်​တွေ ​ပြောပြီး ပြည်သူ​တွေ ​သွေးကျဲ​အောင်၊ ​သွေးကွဲအောင် လုပ်တဲ့သူ မှန်သမျှ … အဲ​ကောင်​တွေဟာ ဒလန်​တွေပဲ။
လူဆိုရင် နားလည်တယ်။ ဒီ​လောက် ဖမ်းဆီးဖိနှိပ် သတ်ဖြတ်​နေချိန်မှာ ကိုယ့်အသက်နဲ့ ရင်းပြီး ရှိစုမဲ့စု အင်တာနက်​လိုင်း​တွေနဲ့ အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ရတဲ့ CRPH အဖွဲ့ဝင်​တွေဟာ သူတို့ စွမ်းသမျှ လုပ်​ဆောင်​ပေး​နေတာ အားလုံးအသိပါ။ ၁၀၀% ကြီး​တော့ perfect ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျာ။ ဒီ​လောက် ကန့်သတ်ချက်​တွေကြားထဲ ဖွဲ့စည်းရတာကိုး။
အခုချိန်မှာ ​ဖောင်းထုဖို့ထက် ဝန်းရံ​ပေးဖို့သာ စဥ်းစားကြပါ။
ဒါကို ​စောက်ဆရာကြီးလုပ် ဖျက်လို ဖျက်ဆီး လုပ်​နေသ​ရွေ့ မအလ ရဲ့ ​ဘောမတသိုက်ထဲကပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
Ohn Lwin says:
2021-04-16 at 1:23 PM
ရေဒီယိုကပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် တနိင်ငံလုံးကို final call ခေါ်ပါ။ crph မှလူထုခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့ မြို့နယ်တိုင်းအတွက် plan ချပြီး ဘယ်မြို့နယ်ကပြည်သူတွေ ကဘယ်နေရာကိုတာဝန်ယူဖို့ ညွှန်ကြားပါ။ ပြည်သူလူထုကို အကုန်ပါဝင်ပေးဖို့ အရင်ကြေငြာ ရက်သတ်မှတ်ပေးပါ။ ပြီးရင် ဘယ်မြို့နယ် ဘယ်နေရာကို ဦးတည်တိုက်ခိုက်ဖို့ တိတိကျကျ ညွှန်ကြားပြီးတနိင်ငံလုံးတချိန်ထဲတပြိုင်နက်တော်လှန်ရေးလုပ်လျှင် ကျနော်တို့ရဲ့ တော်လှန်ရေးဟာ အကျအဆုံးနည်းနည်းနဲ့လျှင်မြန်စွာပြီးသွားပါလိမ့်မယ်။ လူထုကို သတင်းတပြိုက်နက်ပေးနိင်ဖို့နဲ့ ပြည်သူကလေးစားယုံကြည်ရသူတယောက်က final. call ခေါ်ပေးဖို့ပါပဲ။ စကားမစပ် fm 90.2 ကဘာသံမှမကြားရပါ။
May Thu Han says:
2021-04-16 at 1:51 PM
Iron Min says:
2021-04-16 at 1:52 PM
ကြိုဆိုပါ၏ ပြည်သူအတွက်နှစ်သစ်လက်ဆောင်လေးအတွက်ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ။
Jusn Thin says:
2021-04-16 at 2:30 PM
ပြည်သူ့အစိုးရအား လှိုက်လဲစွာကြိုဆိုပါသည်။အောင်မြင်ပါစေPV TV.
Aye Aye Thinn says:
2021-04-16 at 2:33 PM
Zaw Zaw May says:
2021-04-16 at 2:43 PM
ကျွန်မတို့​ ထောက်ခံ​တဲ့​ ကျွန်မတို့​ပြည်သူ​အစိုးရ​ကို​ ကြိုဆိုပါတယ်✊
BoBo Lwin says:
2021-04-16 at 2:53 PM
Bernard Edirisinghe says:
2021-04-16 at 4:02 PM
Great Achievement. Best wishes from Sri Lanka
2021-04-16 at 4:13 PM
လှိုက်လှဲဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် သဘောတူ၊ထောက်ခံ၊ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
San Myint says:
2021-04-16 at 4:36 PM
အရောင်မရွေးဘဲ ပြည်သူအားလုံး တသားထဲ စည်းလုံးကြပါမည်။
Kyawkyaw Lwin says:
2021-04-16 at 5:50 PM
We support federal democracy Government
2021-04-16 at 6:04 PM
Nann Satt Naung says:
2021-04-16 at 8:58 PM
Aung Myat Kyaw Channel ပေါ်လာစေချင်တယ်ဆို အခုပေါ်လာပီ😁